Swimming Pool Dhizaini Dhizaini
Sei uchigadzira mifananidzo yekudhibha
Swimming pool dhizaini mitemo yakakosha chaizvo pakuvakwa kwedziva rekushambira, uye inogona kunzi yakakosha.
Kazhinji, vagadziri vezvivakwa, makondirakiti akajairwa kana vavaki vemadziva vanongopa hurongwa hwemadziva kune vatengi vavo. Nokudaro, kuvakwa kwedziva rekushambira kunogona kuitwa chete nekontrakta mukuru. Nenzira iyi, haugone kuve nesarudzo dzakawandisa maererano nemaitiro ekuvaka, zvigadzirwa uye midziyo. Iwe unofanirwa kubhadhara yako yekuvaka dziva bhajeti pamutengo wekontrakta.
Nekudaro, muGREATPOOL unogona kudzora yako dziva chirongwa bhajeti kuburikidza nemadhirowa atinokugadzirira iwe. Izvi hazvo zvinoda kuti upedze nguva uchikurukura, asi tinogona kukuvimbisa kuti zvakafanira.
Ramba uchiverenga uye tichakutsanangurira maitiro ekutora chikamu uye zvaungawane kubva kwazviri.
Kutanga, tinokupa iwe yakazara seti yemifananidzo yekuitwa kweprojekiti. Iwe uri kunetseka nekusanzwisisa madhirowa edu. Magadzirirwo avo ari nyore kunzwisisa, kunyangwe kune vatsva vari kuvaka madziva ekutuhwina.
Chechipiri, tinopawo runyoro rwakakwana rwemidziyo yekusefa kuti iiswe mumadziva ekushambira nemakamuri epombi.
Chechitatu, yose kuvaka uye kugadzwa hwokugadzira rutsigiro. Unotya kushaya hunyanzvi hwekuvaka dziva rekushambira. Kana zvichidikanwa, tichave newe panguva yebasa kuti tikupe iwe nerutsigiro rwehunyanzvi.
Muchidimbu, kana iwe uchinge watora chikamu muGREATPOOL dhizaini dhizaini, iwe unozokwanisa kunzwisisa kuti dziva rako rekushambira rinoshanda sei; iyo hydraulic diagram inoratidza zvakajeka nzvimbo yepombi, uye mavharuvhu ese nemidziyo iri muimba yepombi inotaurwa.
Mifananidzo yekutuhwina inosanganisira
Mamiriro echirongwa chako: Isu tinokuratidza nzvimbo chaiyo yedziva rekushambira zvichibva pamepu yepamusoro.
Magadzirirwo edziva rekushambira
Nekuda kweiyi dhizaini, iwe uchave unokwanisa kuita zvimiro zveinjiniya nemazvo. Ratidza zviyero zvese zvakayerwa kudzivirira kukanganisa. Ichi chikamu chinoratidza zvakajeka kudzika kwakasiyana kwemvura uye masitepisi anoenda kudziva rekushambira.
Magadzirirwo emigero yekufashukira nemagetsi akaiswa chiratidzo; kazhinji, tichabatanidza ruzivo rwakadzama kuitira kuti vashandi vanzwisise zviri nani.
Chiitiko chedu chinoratidza kuti kushandiswa kwemavara kunoita kuti mufananidzo uverengeke; izvi ndezvechokwadi kunyanya kune infinity madziva.
Muchidimbu, zvese zvedu zvakakosha pakuzadzikiswa kwedhirowa yako yekutuhwina.
Kubva padziva kuenda kuimba yemidziyo
Pachirongwa chese chedziva, takadhirowa marongero epombi akasiyana anobatanidza zvishongedzo zvedhamu nekamuri yemidziyo.
Kuti tive nyore kunzwisisa, takashandisa mavara akasiyana uye takanyatso nyora nzvimbo yechinhu chimwe nechimwe; hapana ngozi yekukanganisa.
Kuti tifambise basa remaplumbers, takaronga zvine musoro mapombi ese aibva mudziva rekutuhwina.
Pakupedzisira, iyi piping marongero inogona kukuzivisa iwe nzvimbo yepombi yega yega; izvi zvinogona kubatsira rimwe zuva.
Imba yemidziyo dzimwe nguva inofuratirwa nenyanzvi dzedziva nekuti haioneki; zvisinei, iyi ndiyo musimboti wekugadzwa kwako. Kutenda kwazviri, mvura yako yedziva ichave yakachena uye yakanyatsogadziriswa. Mune infinity madziva, midziyo yekuchengetedza inofanira kuiswa.
Iyo yekumisikidza dhizaini yakagadzirwa zvinoenderana nehukuru chaihwo hwekamuri inoratidza mapaipi ese, mavharuvhu anodiwa uye zvishandiso muimba yepombi. Mavharuvhu anodiwa anopiwa uye nzvimbo dzadzo dzakanyatsoiswa chiratidzo. Plumber inoda chete kutevera chirongwa.
Semuridzi wedziva rekushambira, chirongwa ichi chinokutendera kuti utore zvakanaka iyo filtration system.
Matanho ekuwana zvirongwa zvekutuhwina
Kurukurai kamwe chete, mozotumira zvinyorwa, zvakadai sezvirongwa zvekuronga, mapikicha ezvakatipoteredza, uye maonero edziva rekutuhwina remangwana.
2.Kuzadzikiswa kwechirongwa chepfungwa
Isu tichafunga zvishuwo zvako uye zviroto kuitira kuti uwane chokwadi chinoshanda chakakodzera nyika yako nenharaunda yayo. Urongwa uhwu hwepfungwa ndiyo yekutanga kudhirowa kwese, uye isu tichapedza nguva yese tichikurukura newe.
Iwe unogashira, mudhijitari PDF fomati, ese madhirowa edhibhi rekushambira kuti ukwanise kuvaka kana kuita kuti dziva rako rivakwe nerunyararo rwakakwana rwepfungwa. Isu tinowedzerawo huwandu hwezvinhu zvekusefa (zvikamu zvinofanirwa kuiswa chisimbiso, zvishandiso, ...)
4.After the swimming pool mifananidzo
Kana uchida, tichapa nzira dzakasiyana dzekutsigira. Unogona kudzidza nezve masevhisi aya pano.
FAQ pamusoro pemadhirowa ekutuhwina
Unoshanda munyika ipi?
Isu tinoshanda online uye hatidi kufamba kuti tikubatsire. Nokudaro, tinoshanda pasi rose.
Ndichakwanisa here kukumbira makotesheni nemifananidzo yako?
Eheka ! Chinangwa chedu ndechekuti iwe utore basa rechirongwa chako chekutuhwina. Nekudhirowa kwedu uye huwandu hwemidziyo, chero mason uye plumber inogona kukupa quote. Ehe, isu tinokupa zano kuti ukumbire makotesheni kubva kune akati wandei mhizha kuti iwe ugone kuenzanisa. Iwe unogona zvakare kupa kutenga michina iwe pachako.
Ndine chirongwa chemugadziri wezvivakwa; chii chimwe chaungandiunzira?
Zvirongwa zvinopihwa nemugadziri wezvivakwa zvinowanzo rough masonry zvirongwa; dzimwe nguva dzine ruzivo rwakadzama rwakananga padziva rinofashukira, asi zvishoma. Mukuwedzera, kuiswa kwepombi, fittings uye filters hazviratidzi. Titumire hurongwa hwako uye isu tichakuudza kuti tingakubatsira sei.
Swimming Pool Service, Public Swimming Pool Solution, Kunze Swimming Pool Solution, Swimming Pool Company, Swimming Pool Project, Infinity Edge Swimming Pool,